सुपर पातलो ढुone्गा
क्याप्स र सिल्स र सामान
बजार र ढुb्गा ढु .्गा
ढुone्गा मोज़ेक ढाँचा
विभिन्न देशहरूमा मेरी क्रिसमस कसरी खर्च गर्ने?
२०-१२-१-18 मा व्यवस्थापक द्वारा
मेरी क्रिसमस मेरी मित्र, यो डिसेम्बरको बीचमा नै हो। के क्रिसमस धेरै टाढा छ? क्रिसमस आउनु भन्दा पहिले हामी तपाईंलाई हतार गर्दछौं र नयाँ वर्षमा तपाईंलाई खुशीको काम र एक सुखी परिवारको कामना गर्दछौं। हामीतर्फ तपाईको ध्यानाकर्षणका लागि धन्यवाद छ र आशा छ कि २०२१ मा हामीसँग अर्को एक्सचेन्ज हुनेछ। कुरा गरौं ...
प्रकृतिमा ल्याण्डस्केप स्टोनको सरल प्रयोग
२०-१०-११ मा प्रशासक द्वारा
ल्याण्डस्केप स्टोनका लागि, डिजाइनरहरू प्राकृतिक कला र पत्थरको कलाको साथ प्रेममा छन्। फ्रैक्चर सतहको आदिम सरलता र प्राकृतिक बान्कीले मूल निरंतरतालाई तोड्दछ, जसले उत्कृष्ट दृश्य प्रभाव र अप्रत्याशित प्रभाव ल्याउँछ। प्रकृति को कला ढु stone्गा को प्राकृतिक सतह एक प्रकारको छ ...
के हामी ढु stone्गाका कमजोरीहरूसँग व्यवहार गर्नमा गलत छौं?
मेरो साथीले एक चोटि मलाई सोध्यो कि म २० वर्ष भन्दा बढी समयदेखि ढु stone्गा उद्योगको निर्माण र निर्माणमा संलग्न हुँदा म धेरै थाकेको थिएँ? मेरो जवाफ हो, "थाकेको छ, सामान्य थाकेको छैन, तर धेरै थकित"। थकित को कारण भारी र कठिन उत्पादन कार्य होईन, तर श्रृंखला O ...
११११-११११, सिनोट्रान्स, यौई स्ट्रिट, शीजियाजुhu्ग, हेबई, चीन